Ciidamada Soomaliya oo ay wehlinan kuwa Daraawiishta Jubbaland oo howlgallo wadajir ah ka sameeyeen degaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada Soomaliya oo ay wehlinan kuwa Daraawiishta Jubbaland oo ...
Ciidamada Soomaliya oo ay wehlinan kuwa Daraawiishta Jubbaland oo howlgallo wadajir ah ka sameeyeen degaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose
Ciidamada dowladda Soomaliya oo ay wehlinayeen kuwa Daraawiishta Maamulka Jubbaland waxaa ay howlgallo wadajir ah ka sameeyeen degaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose oo ay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay ayaa waxaa ay sheegeen in ay sigaar ah howlgalka Ciidamada uga fuliyeen degaannada, Koban, Araare, Lafaha-ragga iyo Xero-Shiid, kuwaas oo dhamaantood u dhow degaanka Buula-Gaduud ee Gobolka Jubbada Hoose.
Guddoomiyaha degaanka Buulo-Gaduud Mahad Mataan Buulle ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen Ciidamada lagu dilay ilaa 10 isugu jira Saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab.
Guddoomiyaha oo la hadlay Warbaahinta dowladda waxaa uu sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay, isla markaana la doonayay in Al-Shabaab looga saaro degaannada howlgalka laga fuliyay.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Daraawiishta Dowlad Goboleedka Jubbaland oo iskaashanaya ayaa dhowr jeer waxaa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen degaano ka tirsan gobolada Jubbooyinka, iyada oo la sheego in lagu dilay Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab.
Previous articleCiidanka Xoogga Dalka somaliyeed oo hawlgalki qorsheysan ka sameeyeen degaanka mubaarak oo ka tirsan gobolka shabeellaha Hoose.
Next articleSaaxiibada Beesha Caalamka Soomaaliya oo sheegay inay ka welweleen war-saxaafadeedyadii mas’uuliyiinta qaarkood ay shalay la wadaageen bulshada.
Ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay farta wadnaha kaga hayaan hannaankii dawladnimo ee Soomaaliya oo sida ay sheegeen mugdi galay...
Waxaa caawa la soo gabagabeeyay xilli ciyaareedka tartanka horyaalka Ingiriiska ...